पोखराका पत्रकारहरु माथिको प्रहरी आतंक बन्द गर : ओम हमाल – JanaSanchar.com
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७६ मंसिर १९, बिहीबार) २०:२४
पोखरामा डन पत्रकार भनेर चिनिने पत्रकार राजेन्द्र अधिकारी उपनिर्वाचनको मुखदेखि अचानक फेसबुक र मोबाइल बन्द गरेर लापत्ता भए। उनी किन गुमनाम भए सबैको चासोको बिषय थियो। तर कोही कसैलाई यस बारेमा गुत्थी कुरो थाहा थिएन।
तर उनी पत्रकार राजेन्द्र अधिकारीले बिहिबार दिउँसो आफ्नो मोबाइल खोले र अपरान्ह आफ्नो फेसबुक वालमा क्क्फु लापत्ता हुनुको कारण खुलाए। उनले आफ्नो फेसबुक वालमा आफुलाई प्रहरीले प्रतिशोधपूर्ण ब्यबहार गरेको खुलाएका छन्। उनले समाचार लेख्ने क्रममा केही मानिसहरुलाई मोबाइल सम्पर्क गरेको आधारमा आफुलाई प्रहरीले दु:ख दिएको उल्लेख पनि गरेका छन्।तर कस्तो दुख दिएको हो भन्ने बारेमा उनले खुलाएका छैनन्।
पत्रकार राजेन्द्र अधिकारीले आफ्नो फेसबुकमा राखेको स्टाटस
भाई बढी ट्यार ट्यार नगर। यहाँ सुरक्षा संयन्त्र भनिएका घुमुवाहरुसंग निरन्तर सम्पर्क हुनेहरु बम पड्काउछन्। आगजनी गर्छन। तारोमा तिमी हामी जस्ता जनता सुसुचित गर्ने पत्रकारहरु पर्छौं।
घुमुवाहारु बम पड्काउने र आगजनी गर्नेलाई समात्न जान्दैनन्। समग्र प्रहरी संगठन र घुमुवाका नाममा बदमासी गरेर प्रहरी संगठन बदनाम गर्नेहरुबिरुद्ध समाचार लेख्ने पत्रकार समात्न दगुर्छन।
यदि पत्रकार समातिएनन भने लामो समयदेखि माओवादी आन्दोलनप्रति बित्रिष्णा बोकेका , निस्क्रिय राजनीतिक जीवन बिताएका बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका पुर्व नेता तथा कार्यकर्ता समातेर आफ्नो बहादुरी र काम देखाउछ्न घुमुवाहरु।
हो, अहिले कास्कीमा तिमी हामी जस्ता हक्की र निडर पत्रकारलाई कोही कसैबाट खतरा छ भने प्रहरी संगठनका नाममा बदमासी गर्ने बदनाम प्रहरीहरुबाट नै तिमी हामी जस्ता पत्रकारलाई खतरा छ।
उनीहरु अहिले हामीलाई सिध्याउन आबस्यक परे नक्कली भिडन्तको नाटक गर्न पनि तयार छन् र यसको संरक्षण कास्कीको प्रहरी नेतृत्वले गरिरहेको छ। तसर्थ तिमी हामी बेलैमा सजग नहुने हो भने जुनसुकै बेला हाम्रो इहलिला समाप्त हुनसक्छ।
उनीहरु हामीलाई प्रतिबन्धित पार्टी ने.क.पा.का नेता तथा कार्यकर्तासंग नियमित सम्पर्क भएको झुठो आरोप लगाएर गिरफ्तार गराएर आफ्नो लुटको साम्राज्य लुकाउन खोजिरहेका छन्।
के पत्रकारको पुलिस, नेता, चोर, फटाहा, सज्जन, साधुसंग सम्पर्क हुनु नौलो कुरो हो र ? यही कुरालाई ठुलो बनाएर पत्रकार गिरफ्तार गर्ने परिपंच गर्नु के जायज हो ? हो, बिप्लवको एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशालाई नैतिक समर्थन गर्ने पत्रकार हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न छ कि छैन भनेर प्रहरी प्रशासनले निगरानी र अनुसन्धान गर्नु स्वाभाविक हो। यसलाई अन्यथा लिनु पर्ने केही छैन। तर तिमीजस्ता न बिप्लवका समर्थक होऊ न कुनै भात्री संगठनमा छौ।
प्रहरी संगठनभित्र रहेका खराब प्रवृत्तिका समाचार लेख्ने तिमी जस्ता स्वतन्त्र पत्रकारलाई प्रहरीले तारो बनाएर हतोत्साहित बनाउने काम गर्नु निन्दनीय र घोर आपत्तिजनक बिषय हो।
जुवाखालबाट बरामद भएको रकम लुकाउने घुमुवा प्रहरीलाई कारवाहीको माग गरेर समाचार लेख्नु के तिम्रो हाम्रो गल्ती हो ? जुन सबुत प्रमाणका रुपमा प्रहरीले प्रस्ट देखिने सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित राखेको छ।
बिप्लवका नेता कार्यकर्ता समात्ने नाममा गाउँ पसेर १५ वर्षीय किशोरीलाई यौन दुर्ब्यबहार गर्ने घुमुवाका एक असईलाई स्थानिय बासिन्दाले दुई-चार झापड हानेर माफी मगाए। स्थानिय जनता र पिडितलाई आतंकित गरेर त्यो घटना लुकाइयो। त्यही उत्पीडनको समाचार लेख्नु के तिम्रो हाम्रो गल्ती हो। यी र यस्तै प्रहरीका बदमासीका घटना सार्वजनिक हुने तयारी देखेर प्रहरीले सम्पूर्ण बल लगाएर तिमी हामीलाई फसाउने जाल बुनिरहेको छ र त्यसमा केही पत्रकार भनाउदाहरु पनि लागि परेको गन्ध आएको छ। तिनलाई पनि नंग्याउन हिम्मत नहार्नु।
देश र जनता अनि उत्पीडित जनताको आवाजलाई बुलन्द गर्दा यदि प्रहरी प्रशासन हामीलाई फसाउन खोज्छ भने त्यसको प्रतिबाध गर्नु नितान्त आबस्यक छ। प्रहरी प्रशासनको दमनदेखि डराएर गलत कामको खुलासा गर्न पछि नहट्नु , आबस्यक परे देश र जनताको लागि बलिदानी दिन पछि नहट्नु।
अन्त्यमा म मानव अधिकारवादी, पत्रकार,बुद्धिजीवी, प्राध्यापक लगायतलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कास्की जिल्लामा किन प्रहरीले निडर र हक्की पत्रकारहरुलाई तारो बनाएर दमन गरिरहेको छ, बेलैमा उचित छानबिन होस्। दोषी देखिए प्रहरी मात्र के पत्रकारलाई पनि कानुनी कारवाही होस्। अन्यथा प्रतिशोध साँधेर पत्रकारलाई दु:ख दिने प्रहरी कर्मचारीलाई सख्त कारवाही होस्।
राजनीतिक आस्था राख्न पाउने संबैधानिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरियोस। पत्रकार र पत्रकारिताको नाममा कोही हिंसात्मक गतिविधिमा प्रत्यक्ष संलग्न छ भने उचित छानबिन गरेर कानुनको दायरा ल्याइयोस। यो वा त्यो नाममा र बहानामा समाचार लेख्ने पत्रकारलाई आतंकित गर्ने काम तुरुन्त बन्द गरियोस।
(२०७६ मंसिर १९, बिहीबार) २०:२४ मा प्रकाशित